Volana Novambra 2015 | FPMA Orléans
Volana Novambra 2015
perikopa Janoary 2016
perikopa heritaona 2016
Alahady 29 Novambra: Advento 1
Alahady voalohany amin'ny Advento.( misy efatra io alahady io ary ny 4 mialohan'ny Krisimasy no izy).I Pasitera Beby Solohery no nitory ny tenin' Andriamanitra tamin'ity fotoana ity. Ny SA kosa no nitarika ny fotoana.
Niisa 54 ny olona tonga tao.
Ny SA dia hanao ny famerenana "Hazo Noely" androany hariva @ 13h30 ka hatramin'ny 16h30
Ny STK dia hanao fivoriana rehefa mirava ho tarihan'i Larry.
Ny AMFO Hanao ny Concert-ny ny Asabotsy 12 Desambra 2015 @ 16h eto @ Chapelle St Marc ka hanao ny famerenana ny Asabotsy 5 Desambra @ 16h sy ny Zoma 11 Desambra @ 18h30.
Ny SZM dia nanolotra ny fisaorana ny vahoakan'Andriamanitra tamin'ny fandraisan'anjara nataony.
Ny avy any ivelany
Ny vondron'ny Fiangonana Kristiana Orléans sy ny oekominisma hanao fotoam-pivavahana ho fangatahana ho an'ny Cop 21 ny Alarobia 2 Desambra @ 18h30 ao @ Eglise St Pierre du Martroi rue Lescures Orléans. I Pst E. ALVAREZ no hitondra ny Teny amin'io.
Ny fotoana manaraka:
Alahady 06 Desambra @ 10h maraina eto @ Chapelle St Marc ihany Alahady voalohany ka hisy Fandraisana sy fandoavana ny adidin'ny MFT.
Ny Mpitandrina Jacky Randriambololona no hitondra ny teny sy hanome ny Fandraisana FT amin'io.
Alahady 22 Novambra 2015
Alahadin'ny Sampana ZVM eto @ Tafo Orleans. Ny Mpitoriteny Henintsoa Rasolonjatovo no nitondra ny Teny mahafaly tamin'io andro io.
Ny SZM no nitarika ny fotoana ary ny Saxo Alto sy ny Clavier no nanaraka sy nandrotsy ny Mpiangona.
Nisy ny varotra barquettes nataon'ny SZVM tamin'io mba hafahany hamenoany ny kitapombolany amin'ny fividianana fitaovana samihafa ho an'ny Fiangonana. Ny mbola tadiavina mantsy dia ny fanamafisampeo hanampiana ny efa ao.
Niisa teo amin'y 43 teo ny mpiangona tonga tao.
Ny SA dia hanao ny famerenana "Hazo Noely" androany hariva @ 13h30 ka hatramin'ny 16h30.
Ny AMFO Hanao ny Rindrankirany ho Fankalazana ny Faha 30 Taonany ny Asabotsy 12 Desambra 2015 @ 16h eto @ Chapelle St Marc
Ny Tafo FPMA Vincennes dia hankalaza ny Fahadimy taonany androny Alahady 22 Novambra @ 15h ao @ 12 rue Monmory 94300 Vincennes.
Ny Tafo FPMA Fihobiana Parisy dia hanamarika ny fahafolo taona niorenany ny Asabotsy 28 Novambra @ 12h30 ao @ Palais de la Femme 94 rue Charonne Paris 11è.
Ny Tafo FPMA Melun hanao Déjeuner Concert ny Asabotsy 28 Novambra @ 12h ao @ Insomnia 2 rue de Bretagne 91220 Brétigny/ Orge.
Alahady 29 Novambra @ 10h30 eto amin'ny Chapelle St Marc
Alahady 15 Novambra 2015
Alahady fahatelo amin'ny volana. Atoa Henintsoa Rasolonjatovo no nitondra ny tenim-pitiavana tamin'io andro io.
Ny fotoana manaraka dia ny Alahady 22 Novambra @ 10h30 eto amin'ny Chapelle St Marc ihany. Alahady natokana ho an'ny Sampana ZavaManeno (SZM) io Alahady io.
Alahady 1 Novambra 2015
Zaikabe natao tany La Roche/Yon
Niisa 9 teo ny avy eto @ Tafo Orleans no nandeha tany.
Noho izany dia tsy nisy Fiangonana teto Orléans tamin'io andro io.
Archives du blog mars 2020 ( 1 ) février 2020 ( 1 ) décembre 2019 ( 1 ) juillet 2019 ( 1 ) juin 2019 ( 1 ) janvier 2019 ( 1 ) décembre 2018 ( 3 ) octobre 2018 ( 1 ) septembre 2018 ( 1 ) juillet 2018 ( 1 ) juin 2018 ( 1 ) mai 2018 ( 2 ) avril 2018 ( 1 ) mars 2018 ( 2 ) février 2018 ( 1 ) janvier 2018 ( 1 ) décembre 2017 ( 1 ) novembre 2017 ( 1 ) juillet 2017 ( 1 ) avril 2017 ( 2 ) mars 2017 ( 1 ) février 2017 ( 5 ) janvier 2017 ( 4 ) décembre 2016 ( 1 ) novembre 2016 ( 1 ) octobre 2016 ( 1 ) septembre 2016 ( 1 ) juillet 2016 ( 1 ) juin 2016 ( 1 ) mai 2016 ( 1 ) avril 2016 ( 1 ) mars 2016 ( 1 ) février 2016 ( 1 ) janvier 2016 ( 1 ) décembre 2015 ( 1 ) novembre 2015 ( 1 ) octobre 2015 ( 1 ) septembre 2015 ( 1 ) mai 2015 ( 1 ) avril 2015 ( 1 ) mars 2015 ( 1 ) février 2015 ( 1 ) janvier 2015 ( 1 ) décembre 2014 ( 1 ) novembre 2014 ( 1 ) octobre 2014 ( 1 ) septembre 2014 ( 2 ) juillet 2014 ( 1 ) juin 2014 ( 1 ) mai 2014 ( 1 ) avril 2014 ( 1 ) mars 2014 ( 2 ) février 2014 ( 1 ) janvier 2014 ( 2 ) décembre 2013 ( 1 ) octobre 2013 ( 2 ) septembre 2013 ( 2 ) août 2013 ( 1 ) juin 2013 ( 2 ) mai 2013 ( 3 ) avril 2013 ( 2 ) mars 2013 ( 5 ) février 2013 ( 3 ) janvier 2013 ( 6 ) décembre 2012 ( 8 ) novembre 2012 ( 13 ) octobre 2012 ( 12 ) septembre 2012 ( 1 )